Bluboo Maya max ကို Root လုပ်ခြင်း ~ မိုးညိုသား
1:40 AM Android Root No comments
ဒီနေ့တော့ ဈေးအသင့်အတင့်နှင့် သုံးလို့အတော်လေး အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Bluboo ဖုန်းအမျိုးအစားထဲက Bluboo maya max ကို Root လုပ်နည်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Root မလုပ်ခင်မှာ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တွေကို အရင်းဆုံး backup လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ Root လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို အောက်မှာပေးထားပါတယ် အရင်ဆုံးဒေါင်းယူလိုက်ပါ.
TWRP For Maya Max
လိုအပ်တွေ ယူပြီးပြီဆိုရင် စလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ တစ်ဆင့်ခြင်းရေးပေးသွားပါ့မယ်။
အရင်ဦးဆုံး Vcom Driver ကို ကွန်ပျုတာမှာ install လုပ်ပါ မရှိသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော် ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
SuperUser ဖိုင်ကို ဖုန်းထဲသို့ ကူးထည့်ထားပါ။ SP Flash Tool ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Flash Tool ကို Right Click ခေါက်ပြီးတော့မှာ Run as Administrator ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Flash Tool ပွင့်လာပြီဆိုရင် Option ကိုဝင်ပါ အထဲမှ Download ကိုထပ်ဝင်ပါ၊ Download Option ထဲမှ USB Checksum ကို အမှန်ခြစ်ထားပေးပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Scatter-loading ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့ Twrp ဖိုင်မှာ Scatter ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ သတိထားရမှာကတော့ Scatter Loading လုပ်ပြီးသွားရင် Recovery တစ်ခုကိုသာ အမှန်ခြစ်ထားရမှာပါ. အကယ်၍ အခြား ဟာတွေကို အမှန်ခြစ်ထားမိပါက ဖြုတ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့က TWRP Recovery တစ်မျိုးကိုပဲ သွင်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဖုန်းထဲမှာ Developer Option ကိုဝင်ပြီးတော့ OEM Unlock ကို On ပါ၊ USB Debugging ကို On ထားပါ. ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုပိတ်ပါ Flash Tool မှ Download ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ ပြီးမှ ဖုန်းကိုချိတ်လိုက်ပါ Flash Tool မှ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
TWRP သွင်းတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် အစိမ်းရောင် အမှန်ခြစ်ကလေး Popup တက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် Recovery သွင်းတာ အောင်မြင်သွားပါပြီ၊ ဖုန်းကိုတော့ Power မဖွင့်ပဲနှင့် Rcovery ကို Power + Volume up ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Recovery သို့တန်းဝင်ပါ။ ( အကယ်၍ Power တန်းဖွင့်ပြီးမှ Recovery ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် မရပါဘူး။) Twrp Recovery ကိုရောက်ပြီဆိုရင် စောစောဖုန်းထဲမှာ ထည့်ခဲ့တဲ့ Superuser ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Reboot ပေါ့နော်။ ဖုန်းပြန်ပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ SuperUser လေး သင့်ဖုန်းထဲကို ရောက်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာအတွက်ကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ apk ကို အသုံးပြုပြီးတော့ သွင်းယူနိုင်ပါပြီ။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။